အသက်စွန့်ခဲ့တဲ့ ကြယ်လေးတွေ အတွက် နာရီတိုင်းရဲ့ ၄၄ မိနစ်ရောက်တိုင်းမှာ အံကို၅ခါ ကြိတ် တောက် ၅ ခါ ခေါက်ဖို့ သတိပေးလာတဲ့ မောင်မောင်အေး – Sport Gaber
အသက်စွန့်ခဲ့တဲ့ ကြယ်လေးတွေ အတွက် နာရီတိုင်းရဲ့ ၄၄ မိနစ်ရောက်တိုင်းမှာ အံကို၅ခါ ကြိတ် တောက် ၅ ခါ ခေါက်ဖို့ သတိပေးလာတဲ့ မောင်မောင်အေး
August 12, 2021 - by Sports Gaber - LeaveaComment
အနုပညာလောကမှာ နာမည်ကြီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အစီစဉ်တင်ဆက်သူ မောင်မောင်အေးကတော့ သရုပ်ဆောင်သိပ်မလုပ်ပေမယ့်လည်း ပရိသတ်တိုင်းနဲ့မစိမ်းတဲ့ ဆယ်လီတစ်ယောက်ပါပဲ။ ထို့အပြင်မောင်မောင်အေးကတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ် တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်နေခဲ့သူပါ။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ပြည်သူနဲ့အတူ လှူကြမယ်အစီအစဉ်၊ We Love Yangon အဖွဲ့ ၊Quarantine ဝင်နေတဲ့လူနာတွေကိ
သွားရောက်ဖျော်ဖြေရေးစတာတွေမှာ ကိုယ်ကျိုးမဖက်ဘဲ ရှိသမျှအချိန်ပေးပြီး ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေသူပါ။ အာဏာသိမ်းပြီးနောက် စစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်မှတ်ထားမှူကြောင့် ပြည်ပသို့ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ အခု သူ့ရဲ့ Facebookကနေတဆင့် 14လမ်းက လူငယ်၅ဦးရဲ့ သူရဲကောင်းဆန်ဆန် တိုက်ပေါ်ကနေ အဆုံးစီရင်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အခုလိုပဲ ပြောလာပါတယ်။
ဘယ်နှစ်နာရီမဆိုရဲ့ ၄၄ မိနစ် ရောက်ချိန်တိုင်းမှာ … အံ ၅ ခါ ကြိတ်မယ်…. တောက် ၅ ခါ ခေါက်မယ်….လက်သီးကျစ်ကျစ် တင်းတင်း ၅ ကြိမ် ဆုပ်မယ်အသက်တောင်ပေးခဲ့ရဲတဲ့ ကြယ်တွေအတွက်ငါ ဒီလောက်တော့ လုပ်နေနိုင်ရမယ်ငါဒီထက်အများကြီး ပိုလုပ်နိုင်ပါစေသားလို့ ရေးတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
အသကစြှန့ခြဲ့တဲ့ ကှယလြေးတှေ အတှကြ နာရီတိုငြးရဲ့ ၄၄ မိနဈရောကတြိုငြးမှာ အံကို၅ခါ ကှိတြ တောကြ ၅ ခါ ခေါကဖြို့ သတိပေးလာတဲ့ မောငမြောငအြေး
အနုပညာလောကမှာ နာမညကြှီးသူတဈယောကဖြှဈတဲ့ အစီစဉတြငဆြကသြူ မောငမြောငအြေးကတော့ သရုပဆြောငသြိပမြလုပပြမယေ့လြညြး ပရိသတတြိုငြးနဲ့မစိမြးတဲ့ ဆယလြီတဈယောကပြါပဲ။ ထို့အပှငမြောငမြောငအြေးကတော့ ကိုရိုနာဗိုငြးရပဈြကာကှယြ တိုကဖြကွရြေးလုပငြနြးတှမှော အငတြိုကအြားတိုကပြါဝငနြခေဲ့သူပါ။ သူကိုယတြိုငလြညြး ပှညသြူနဲ့အတူ လှူကှမယအြစီအစဉြ၊ We Love Yangon အဖှဲ့ ၊Quarantine ဝငနြတေဲ့လူနာတှကေိ
သှားရောကဖြွောဖြှရေေးစတာတှမှော ကိုယကြွိုးမဖကဘြဲ ရှိသမွှအခွိနပြေးပှီး ဦးဆောငလြုပကြိုငနြသေူပါ။ အာဏာသိမြးပှီးနောကြ စဈကောငစြီရဲ့ပှဈမှတထြားမှူကှောင့ြ ပှညပြသို့ထှကပြှေးခဲ့ရပါတယြ။ အခု သူ့ရဲ့ Facebookကနတဆေင့ြ 14လမြးက လူငယြ၅ဦးရဲ့ သူရဲကောငြးဆနဆြနြ တိုကပြေါကြနေ အဆုံးစီရငတြဲ့ ကိဈစနဲ့ပတသြတပြှီး အခုလိုပဲ ပှောလာပါတယြ။ ဘယနြှဈနာရီမဆိုရဲ့ ၄၄ မိနဈ ရောကခြွိနတြိုငြးမှာ … အံ ၅ ခါ ကှိတမြယြ…. တောကြ ၅ ခါ ခေါကမြယြ….လကသြီးကစွကြစွြ တငြးတငြး ၅ ကှိမြ ဆုပမြယအြသကတြောငပြေးခဲ့ရဲတဲ့ ….ကှယတြှအတှေကငြါ ……ဒီလောကတြော့ လုပနြနေိုငရြမယြ…. ငါ….ဒီထကအြမွားကှီး ပိုလုပနြိုငပြါစသေား… လို့ ရေးတငခြဲ့တာဖှဈပါတယြ
Previous Article အာဆင်နယ်ဂန္တဝင်ကို စောင့်ကြည့်ပြီး ကြီးပြင်းလာခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံလိုက်ပြီး inspire ဖြစ်စေတဲ့ အသင်းဖော် အမည်ကို ဖွင့်ပြောလိုက်တဲ့ ဒန်နီယယ် ဂျိမ်းစ်
Next Article လိဒ်နဲ့ပွဲစဉ်မှာ ကစားသမားကိုးဦးအထိ လွဲချော်နိုင်ချေရှိတဲ့ ယူနိုက်တက်